तपाईँको स्मार्टफोनमा इन्टरनेट स्लो चलिरहेको छ? त्यसोभए स्पीड बढाउने तरिका जान्नुहोस् - Technology Khabar
» टिप्स » तपाईँको स्मार्टफोनमा इन्टरनेट स्लो चलिरहेको छ? त्यसोभए स्पीड बढाउने तरिका जान्नुहोस्
तपाईँको स्मार्टफोनमा इन्टरनेट स्लो चलिरहेको छ? त्यसोभए स्पीड बढाउने तरिका जान्नुहोस्
Technology Khabar १ पुष २०७८, बिहीबार
तपाईँले आफ्नो स्मार्टफोन लामो समयदेखि प्रयोग गरिरहनुभएको छ, तर अहिले यसको स्पीड पहिलेभन्दा कम भएको छ र इन्टरनेट पनि सुस्त गतिमा चलिरहेको छ? आज हामी तपाईलाई यहाँ कसरी घरमै बसेर ५ मिनेटमा आफ्नो फोन र इन्टरनेटको स्पिड बढाउन सक्नुहुन्छ भनेर बताइरहेका छौँ ।
तपाईंले इन्टरनेट ब्राउज गर्दा, तपाईंको एन्ड्रोइड फोनको वेब ब्राउजर एपले दैनिकरूपमा डाटा सङ्कलन गर्छ। यो डाटाले केहि फरक चीजहरू गर्छ, सामान्यतया तपाईंको वेब ब्राउजरको क्यास र कुकीहरू फाइल गर्ने लगायतका कार्यहरु। यसले तपाइँले बारम्बार भ्रमण गर्ने वेबसाइटहरूको एसेटहरू स्टोरेज गर्दछ र तपाइँ वेबसाइटहरूमा लग इन हुँदा विवरणहरू भण्डारण गरेर तपाइँको ब्राउजरको लोडिङ गति सुधार गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
यद्यपि, कुकीहरू तपाइँको ब्राउजिङ इतिहास ट्र्याक गर्न वेबसाइटहरु द्वारा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। साथै, तपाईँको ब्राउजरको क्यास जति ठुलो हुन्छ, तपाईको ब्राउजर एप त्यति नै ठूलो हुनेछ। यसले विरलै भ्रमण गरिएका वेबसाइटहरूबाट पनि डाटा भण्डारण गर्छ। यसको कारणले गर्दा तपाईँको इन्टरनेट र मोबाइलको स्पीड सुस्त हुन्छ। त्यसकारण, तपाईंले आफ्नो वेब ब्राउजरबाट कुकीज र क्यासहरू खाली गरिरहनुपर्छ। यसले गति राम्रो राख्छ।
गुगल क्रोम प्रयोगकर्ताहरूका लागि
सबैभन्दा पहिले आफ्नो फोनमा गुगल क्रोम खोल्नुहोस्। यहाँ अब तपाईंले माथि दायाँ छेउमा ३ थोप्लाहरू देख्नुहुनेछ, तिनीहरूलाई ट्याप गर्नुहोस्।
ट्याप गरेपछि अब तपाईको अगाडि धेरै विकल्प आउनेछन् ।
यी मध्ये, तपाईंले हिस्ट्री (history) मा ट्याप गर्नुपर्छ।
हिस्ट्रीमा ट्याप गरेपछि क्लियर ब्राउजिङ डाटा (Clear Browsing Data) को विकल्पको साथमा तपाईले आफ्नो ब्राउजिङ हिस्ट्री देख्नुहुनेछ। यसमा ट्याप गर्नुहोस्।
अब तपाईसँग २ विकल्पहरू हुनेछन्: बेसिक र एडभान्स।
बेसिकमा, तपाईंले आफ्नो ब्राउजिङ हिस्ट्री, कुकीज र साइट डाटा, क्यास इमेजहरू र फाइलहरू खाली गर्न सक्नुहुन्छ।
एडभान्समा यसका अलावा पासवर्ड सेभ, अटो फिल डाटा र साइट सेटिङ्स पनि क्लियर गर्न सकिन्छ।
एडभान्समा सेटिङ्समा, तपाईंले क्यास, कुकीज र डाटा खाली गर्ने समय पनि चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
मोजिला फायरफक्स प्रयोगकर्ताहरूको लागि
गुगल क्रोम जस्तै मोजिला फायरफक्स ब्राउजरको पनि स्पीड बढाउन सकिन्छ।
सबैभन्दा पहिले आफ्नो फोनमा मोजिला फायरफक्स खोल्नुहोस्।
त्यसपछि सेटिङ्समा जानुहोस् र ब्राउजिङ डाटा मेटाउनुहोस्।
अब तपाइँले तपाइँको ब्राउजिङ हिस्ट्री, साइट डाटा, साइट अनुमतिहरू साथै तपाइँको डाउनलोड फोल्डरबाट कुकी र क्यास इमेज फाइलहरू मेटाउन सक्षम हुनुहुनेछ।
प्रकाशित: १ पुष २०७८, बिहीबार